ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Archives - MM Live News
မိန်းကလေးများ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့…. ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ.
April 12, 2019 MM Live News
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်. ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့..ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်… ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်..မနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ…ကောင်မလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ… နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားက ဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်…. အတူသွားအတူအတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ …. သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ် လို့ ပြောတော့ကောင်မလေးက နင်ငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင် အခုချက်ချင်းရဲ ကိုကြောင်းကြားပြီး ငါ့ကိုမတရားစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး […]
April 10, 2019 MM Live News
ဆေးပညာအမြင်အရ တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အခြားအမျိုးသမီးတွေထက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်ပြီး၊ သားကောင်းမိခင်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယောက်ျားတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရမှာလည်း တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုသာ ပိုမိုတပ်မက်ကြတယ်လို့ အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ တင်ပါးကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ပုရိသတွေ ဘာကြောင့်တပ်မက်ရသလဲဆိုတာရဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့သာဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်လို့ တစ်ချို့အသုံးအနှုန်းတွေဟာ 18+ တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ (၁) စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ကို တကယ်အကောင်ထည်ဖော်တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့ ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ကြည့်ပါတယ်။ နောက်မှ မျက်နှာကို ကြည့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တင်ပါးအကြီးအသေးဟာ သူတို့ရဲ့ ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွေအတွက် အလွန်အရေး ပါပါတယ်။ ရေရှည်မှာလည်း တင်ပါးကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာကို ဆုလာဒ်လို့ […]
အပြာဇာတ်ကားများဆက်လက်ရိုက်ကူးသွားမယ့် မြန်မာမော်ဒယ်ကအမျိုးသားများ အားပေးဖို့တောင်းဆိုပြီ
မြန်မာနိုင်ငံအတွကင်း အွန်လိုင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အပြာရုပ်သံဇတ်လမ်းများစွာရိုက်ကူးအောင်မြင်နေတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ် နေခြည်က သူမရဲ့ ပုရိသ ပရိသတ်များကို Viber,Whatapp,Messenger group အသစ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ထက် ကျပ်တစ်သောင်းဈေးမြင့်တက်သွားပြီဟုကြေငြာလိုက်သည်။ မြန်မာအပြာမင်းသမီး နေခြည်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် ပေ့ Costume Model Nay Chi စာမျက်နှာမှာ နေခြည် ၃လပိုင်း ၁ရက်နေ့မှာ Group အသစ်စပါမယ် . ဒီတစ်ခါ Group က အချိန်တစ်လပါ ။ညတိုင်း ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ နာရီအတွင်း ဗီဒီယို တစ်ခုတင်သွားပါမယ် ။ အခန်းဆက်လေးနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းအောင်တင်သွားပါမယ်။၀င်ကြေးကို လေးသောင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။ အဆိုပါ Group များကို ၀င်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ နေခြည်ဆီကို ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး ၀င်ရောက်လိုကြောင်းပြောဆိုပြီး Wave money […]
March 4, 2019 MM Live
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်… ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်… တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်… ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်… တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်… လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်… ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကလူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ ရစေတယ်… ဆုံးမ ပြောဆိုစရာရှိရင် နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ပြောဆိုတယ် … တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက “မယားကြောက်” လို့ ခနဲ့တာကိုမခံနိုင်ဘဲ မိန်းမအပေါ်နိုင်စားပြ ချင်တယ်… […]
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကာလသားတို့ဘာသာဘာဝ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မဟုတ်တရုတ်ဇာတ်ကားတွေ အတူကြည့်လိုက်သောအခါ…
March 3, 2019 MM Live
အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကာလသားတို့ဘာသာဘာဝ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မဟုတ်တရုတ်ဇာတ်ကားတွေ အတူကြည့်ကြစဉ်မှာ အရှက်ကောင်းကောင်း ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ ကြည့်နေတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ သူရဲ့ချစ်သူက အပြာဇာတ်ကား သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ဖြစ်နေလို့ပါ။တကယ်တော့ အဲဒီကောင်မလေးက ဂျပန်နိုင်ငံသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်ကို ပညာတော်သင် သွားချင်တယ်ဆိုလို့ ကာယကံရှင်အမျိုးသားက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီး ဂျပန်ကို ပို့ပေးလိုက်သူလို့ သိရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာ အဲဒီကောင်မလေးက ငွေစုနိုင်ဖို့ တစ်ခြားနည်းလမ်းကို ရှာကြံခဲ့တာပါတဲ့။ ဒီအကြောင်းကို အမျိုးသားဖြစ်သူကိုယ်တိုင် လုံးဝ မသိခဲ့ဘဲ၊ ယခင်ကလည်း ဒီလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြာကား စုပြီးကြည့်ကြသော်လည်း သူ့ကောင်မလေးရဲ့ ဇာတ်ကားတွေက သိပ်မပျံ့သေးတော့ မသိခဲ့ရှာဘူး။ သူတို့တစ်တွေ လက်တလော ဝယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမှာမှ သူမက မင်းသမီးဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတာပါ။သူတို့က တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို […]
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ….
ချစ်သူရည်းစားနဲ့ Living Together ကိစ္စ ချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together ) လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ ။ အချိန်တွေ ဘာတွေ ဆွဲပြီး တွဲနေရင်တော့ ကောင်လေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် ကောင်မလေး ဘက်က အရမ်းကို နစ်နာတယ် ။ အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ မရှိတာ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေနဲ့ တူပြီး Snare သီချင်းထဲကလို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ ။ နိုင်ငံခြား […]
February 26, 2019 MM Live
#ရက်စက်လိုက်တာမေမေရယ်(ဖြစ်ရပ်မှန်) ရက်စက်လိုက်တာမေမေ သားမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ…သားက မေမေ့ ရင်ကဖြစ်တဲ့သွေးနဲ့ အသက် သွင်းထားတဲ့ သားအရင်းပါ… လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲလှတယ်လို့ မေမေ လူမှန်းသိတတ်စက ဖွားဖွားပြောခဲ့တာ မေမေမှတ်မိသေးရဲ့လား…. ဖေဖေ နဲ့မေမေတို့ရဲ့မာန တိုက်ပွဲ အာဍ္ဎာတ တိုက်ပွဲ အတ္တ တိုက်ပွဲမှာ သားက ဓါးစားခံလားမေမေ…. လူ့ဓန ဆိုတာ ရှာလို့ရပါတယ်အမေ …လူ့ဘဝ ဆိုတာတော့ ရှားတယ်အမေ…. သားရဲ့ကံပေါ့….တစ်ဘဝလုံးကိုပုံအပ် ယုံမှတ်လို့ ချစ်ကြင် မေမေ့ဝမ်းထဲတစ်ခါလေးဆိုမှ တစ်ခါတည်း ဝင်ခဲ့မိတာပါမေမေ…. မေမေတို့ လူမှုရေး အပူမီးတွေကို ရင်စီးပြီးခံခဲ့ရတဲ့အမေ့သား ဘာဆိုဘာမှ နားမလည်ခဲ့ဘူးမေမေ…. မေမေရယ် သားဟာ မေမေတို့မိသားစုလေးအတွက် ဒုက္ခတွေ မျှဝေရင်း ဘဝတေးအလှတူညီကုံးရင်း တစ်ခဏ ဖေးမကူညီရုန်းဖို့ရောက်လာတဲ့သားပါ…. မေမေ သားကို အမျိုးမျိုးဖျက်ဆီးဖို့ကြံခဲ့တယ်…မေမေ အကြံစည် အထမမြောက်ခဲ့တောငြင်းလွှတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုတောင် ဆူအောင့်နေတဲ့ […]
February 23, 2019 MM Live
တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ….Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီးသွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messengerလေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူး.. ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာFbဆိုတဲ့ စိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိတာ မရှိတာ နားမလည်ကြပဲ ဒု သ န သောဆိုတဲ့ အပြစ်ကို လူမသိ သူမသိ တချို့တွေ ကျူးလွန် နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းအကြောင်းဆက်ရအောင် သူ့နာမည် ကျော်မြင့်သူတို့မိသားစုက ဝန်ထမ်းတွေပါ သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ သူ့မိန်းမ Fb သုံးရင်းနဲ့ ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ စပြီး ခင်ပါတယ် အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားပါ ” မင်္ဂလာပါ နေကောင်းလား ” စသည်ဖြင့်ပေါ့.. ကျနော့်သူငယ်ချင်းကလည်းသူတို့ ရိုးရိုးသားပဲဆိုတော့ […]
” အိပ်ရာပေါ်က လူတန်းစားများ “
February 20, 2019 February 22, 2019 MM Live
လိင် အဆင့်ကတက်မလာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်… ” အိပ်ရာပေါ်က လူတန်းစားများ ” အရာရာအားလုံးထက် အိပ်ရာပေါ်ကကိစ္စကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့နေကြတယ်… မုဆိုးမတစ်ယောက်.. လင်သားသေသွားပါပြီ…အရွယ်လည်းကောင်းတုန်းပါ… သူ့ဘဝ သူ့မိဘဘဝ သူ့ကလေးတွေဘဝ သူဘယ်လိုရုန်းကန်မလဲ…ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မှာလဲ … သူဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာထက်.. သူဘယ်သူနဲ့ထပ်အိပ်မလဲ… သူဘယ်လိုအိပ်မလဲဆိုတာကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့နေတယ်။ Single mother တစ်ယောက်…လိုချင်လို့ဘဲရရ…မလိုချင်ဘဲရရ… ရလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့သူမအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီး ပုံဖော်မလဲဆိုတာထက်… ဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့တာလဲ…ခုဘယ်သူနဲ့အိပ်နေတာလဲ…. နောက်ဘယ်သူနဲ့ထပ်အိပ်ဦးမှာလဲဆိုတာကိုဘဲ သိချင်နေကြတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေကြတယ်။ ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်..အလုပ်ကိုက လူတွေနဲ့လိုက်အိပ်မှပိုက်ဆံရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပါ… ရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့သူ့ဘဝ သူ့မိသားစုဘဝ သူ့အနာဂတ်အတွက် သူဖန်တီးတည်ဆောက်ရပါတယ်… ငွေပေးမယ့်သူက အိပ်ဖို့ခေါ်တာမဆန်းပေမယ့်ငွေလည်းမပေးဘဲ…ဘာမှမကူညီကြဘဲ…. ဘယ်သွားအိပ်တာလဲ…ဘယ်လောက်ရလို့ အိပ်တာလဲ…. ဘယ်သူနဲ့အိပ်တာလဲကိုသာစပ်စုကြတဲ့အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေကြတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ FA တွေ…သူ့ဘဝရဲ့ သမိုင်းတွေ….သူ့ဘဝရဲ့ စိတ်ကူးတွေ…. သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေထက်ဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့တာလဲ…တိတ်တိတ်ပုန်း အိပ်မယ့်သူရှိနေတာလား….. အိပ်ဖို့လူမရှာတော့ဘူးလား စတဲ့…ခုတင်ပေါ်က […]